Union Minister for International Cooperation receives State Secretary of Foreign Affairs of Norway – Ministry of Foreign Affairs
U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation received Ms Marianne Hagen, State Secretary of the Foreign Affairs of Norway at 8:30 am on3December 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
At the meeting, they cordially exchanged views on matters pertaining to the strengthening of bilateral relations and cooperation, providing assistance to Myanmar’s efforts for peace and national reconciliation, democratization and development. They also discussed on recent developments in Rakhine State and issues of mutual interest.
The Union Minister for International Cooperation hostedaworking luncheon for the visiting Norwegian Delegation at the Park Royal Hotel, Nay Pyi Taw.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Ms. Marianne Hagen အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်၊ (၀၈၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကြိုးပမ်းမှုများအား ကူညီပံ့ပိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အဆိုပါ နော်ဝေ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။